4 Hababka si uu u daawado Lugood Movies on TV
Yaa ma jecla inuu kireeyo ama ay filimada ka dukaanka Lugood? Waa maktabada ugu haboon oo dhamaystiran ee filimada in lagu diiwaan geliyeen. Easy in ay helaan iyo xataa fudud si uu u daawado oo tayo sare oo gabi ahaanba soo dhaweynta image, tani waa doorasho ah in dad badan oo la sameeyo marka ay u leeyihiin in ay seexdaan iyo axada. Dhibaatadu waxa ay in badan oo dadka la kulmi waa in kastoo ay ka heli karaan filimada, kuwaas oo ka mid ah qalabka ay Apple, waxay la kulmaan dhibaato weyn marka ay u baahan yihiin si ay u daawadaan filimada, kuwaas oo shaashad weyn ama telefishinkooda. Tan iyo nolasha oo ah helitaanka filimada iyo videos ka Lugood waa heer sare ah, waxa aanu fahamsannahay in aad leedahay badan oo filimada lagu kaydiyaa maktabadda ayaanka Lugood, kaas oo ay sidoo kale la soo bixi ama lagu soo iibsaday.
Daawashada filimada Lugood on TV noqon kartaa wax badan oo xiiso gaar ah leh aad qoyskaaga iyo saaxiibadaa si Qiyaasan fiican. Maqaalkani waxa uu doonayaa inuu ka hadlo 4 Siyaabaha ugu badan ee aad heli karto iyo daawado filimada Lugood on your TV oo u samaysaa si fiican video daawashada waayo-aragnimo ah. Raac talaabooyinkan si T si aad u hesho faa'iidada ugu weyn.
Qaybta 1aad: Daawo movies Lugood on TV by in DVD ah gubanaya
Qeybta 2: Daawo movies Lugood on TV via computer
Qeybta 3: Daawo Lugood filimada on TV Apple
Qeybta 4: Watch Video ka Your iPad on your TV
Qeybta 5: Chart Isbarbar
Tallaabada 1 - Gubasho videos in DVD ah waa habka ugu wanaagsan ee suurto gal ah, taas oo ka mid ah ka heli karaan movie kasta oo meel kasta. Waxaa isku mid ah ayaa sidoo kale waa run, waayo, Lugood. Inta badan filimada Lugood waa qaab M4V iyo dhibaatada aasaasiga ah waa in ay sida caadiga ah s ilaaliyo Apple ee DRM.
Tallaabada 2 - M4V files DRM guud ahaan ma guban kara DVD-yada, sababtoo ah xuquuqda la ilaaliyo content ee la heli karo iyada oo videos. Waayo, kanu DRMs ku leeyihiin in laga saaro ka dibna waxaa la ciyaari karayaan TV'yada iyada oo ciyaaryahan. Tallaabada xigta oo sidaas daraaddeed waa inay crack ilaalinta nuqul ka mid ah content digital ka filimada Lugood ka dibna nuqul ka filimada DRM-la'aanta ah oo ku saabsan in DVD ah ee aad dooratay.
Tallaabo 3 - Mid ka mid ah siyaabaha ugu fudud ee taasi ku sameeyn iyada oo software ah Wondershare Video Converter Ultimate taas oo ah barnaamijka ugu wanaagsan oo kaa caawin kara in ay ka saareen DRM oo ay ka dhigi DVD aad hal mar. A Faydi DRM DVD Jochen gaare tanu waa saaxiib wanaagsan ee xaalad tan la siiyo. .
Tallaabo 4 - Mid ka mid ah hal dhibic in aad leedahay si aad xusuusan marka la isticmaalayo PC MAC ee la mid ah waa in barnaamijka uu yahay kala duwan. Wondershare Video Converter Ultimate for Mac Waa waxa aad ku waa in la raadinaya. Laakiin maskaxda ku hay in version Mac ma awoodi doonaan in ay soo saarto ilaalinta DRM ka Lugood aad u.
Talaabada 5 - Waxaad si loo soo dajiyo barnaamijka iyo waxa maamula. Ka dibna waa inaad u tagtaa tab Gubashada ka dibna dooro dar Faylal ay ku darto Lugood Movies in aad rabto in aad u dirto DVD ah taas oo markaas loo isticmaali karaa ciyaaro on TV.
Tallaabada 6 - By ka dibna xulashada menu DVD iyo gujinaya "Guba" waxaad bilaabi kartaa gubasho DVD ah ka files movie Lugood. Waayo, files M4V ilaaliyo, waxaad u baahan tahay si aad u hesho ah qaab la gediyay kale oo ka saari doonaan DRM ka dibna aad sii wadi karo sida kor ku xusan.
Tani waa waxa interface Wondershare Video Converter Ultimate ee u eg,
Tallaabada 1 - Haddii aad hore u leedahay Lugood ugu on your computer ka dibna si kale oo aad u badbaadin karaa kuwa filimada kiro ah ka qashinka waa inuu u ciyaaro videos ku Lugood via kombiyuutarka. By xira kombiyuutarka si aad u hubiso in TV in aad daawan karto isku dhex Lugood in xiran yahay in computer ka dhigi karaa.
Tallaabada 2 - Haddii aad u heli kartid cable HDMI ah ka dibna inta badan dhibaatooyinka aad ka weyn tahay. By si toos ah isku xira waxa la arki karo on your computer gal TV waxaad u baahan doontaa gudbinta kaamil ah in ay sidoo kale saameyn kuma yeelan doono tayada image iyo qeexidda.
Tallaabo 3 - Waxaad isticmaali kartaa qalabka lagu bedbeddelo telefishinka si ay u tagaan goobta. Goobaha The sheeg doonaa biiro u aqbasho TV ee dekedda saxda ah. Xitaa aad ku xidhan karto oo dhigay adabtarada ee naqshadeynta iyo sii wadaan in ay dalban oo wuu isticmaali shaashadda TV-ga isagoo loo qaatay kormeere meesha aad ku noqon doonaan badi daawashada filimaanta ah. By isticmaalaya tallaabo fudud waxaad ka ciyaari kartaa Lugood kasta oo shaashadda aad ka doorbido ee daawanayay. Ha ku hayn salool in ay aad kooxda.
Tallaabo 4 - Waxa kale oo aad ku biiri kartaa adiga oo computer aad TV via noocyada kale ee audio iyo video fiilooyinka. Si aad u xirmaan fiilooyinka audio waxaad u baahan doontaa si aad u hesho rikoodh cable Miniplug-to-RCA ah oo ay isku xidha tan aad Jack headphone on your computer iyo dekedda audio on your TV. Wixii talooyin video ah waxaad u baahan doontaa laba hab. Haddii aad leedahay khadka S-video ah oo ku saabsan PC markaas waxaad isticmaali kartaa cable S-video ah in ay ku xidhmaan dekedaha RCA ee la heli karo aad TV. Xiriir VGA ama DVI A kaa caawin kara si toos ah xira TV iyo your computer, samaynta shaqada bandhigay sida ilaaliye ka.
Tallaabada 1 - Si kale si uu u daawado filimada iyo videos Lugood on TV ee aad firaaqada ah waa in xiran TV Apple. Loogu tala galay ujeedada gaarka ah oo keliya, Apple TV xidhan karto filimada ee maktabadda si aad u Lugood TV-ga, kaas oo aad u doonayaan in ay daawadaan filimada aad.
Tallaabada 2 - By doorashada si hagaagsan filimada in aad rabto ka maktabadda Lugood in sanduuqa TV Apple, waxaad yeelan doontaa oo dhan filimada la doortay ee aad heysan in ay ku xidhmaan shaashad weyn oo jira farqi aasaasiga ah in mid ka mid Wajiyaalna iPods iyo iPads , inkasta oo ay leeyihiin ka xoogbadan, video saarka. . Haddii aad leedahay TV Apple ah ka dibna dhibaatooyin aad la yareeyo si ay arrin uga yar ah oo keliya isku xira ee fiilooyinka. .
Tallaabo 3 - Haddii ay fursad kasta oo aadan TV Apple ah ka dibna leedahay aad leedahay siyaabo kale oo tartamaya dhibaatadan. Laakiin ka hor inta Goldogob talaabooyinkan waxaad dooran kartaa kaas oo noqon kara kharashka habka ugu fiican ee aad u.
Tallaabo 4 - Waxa kale oo aad u baahan doontaa internet-ka si ay u sii qulquli filimada ka TV Apple. Wixii sawir tayo leh waxa kale oo aad u baahan doontaa widescreen wanaajiyey qeexidda TV ama TV qeexitaanka sare. The Mac ama Lugood PC ku filan si ay u sii qulquli oo dhan filimada loo baahan yahay in aad u baahan tahay si ay u sii qulquli in.
Waxaa jira laba hab oo hoos kugu caawin kara inaad daawato videos on TV a. Midkii kowaad wuxuu u xoogaa la ikhtiyaarka ah Airplay oo kale waa fursad ee isku xira iPad ah in TV si toos ah. Baridaan wuxuu ku haboon jeebkaaga iyo sheeegateen oo loo isticmaali karaa in lagula dagaalamo xiiso in aad dareensan tahay.
Tallaabada 1 - feature AirPlay ayaa bilowday si gaar ah kuwa doonaya in ay daawadaan filimada online ay TV. Waxaad isticmaali kartaa habka wireless si uu u daawado filimada shactarada Ganacsiga iyo sidoo kale videos aad toogtay iyo filimada kale ee kiro ka iPad u sanduuqa Apple TV. Waxaa loo baahan yahay in aad leedahay HDTV ah oo la mid ah.
Tallaabada 2 - Marka aad bilowdo in daawashada filimka wax ku iPad ah, aad ku sawirnaa button AirPlay oo waxaad awoodi doontaa inaad si aad u ogaato in qaybaha dejinta ee gacanta ku video ah. In kastoo aad noqon doontaan si uu u daawado oo keliya mid ka mid screen hal mar awoodaan, weli waxay noqon doontaa in aad awood u qulquli in mid ka mid ah filimada in lagu daawado si sanduuqa TV Apple oo markaas aad leedahay si aad tixraac tallaabooyinka ay ku saabsan yihiin TV Apple ah qaybta.
Tallaabo 3 - Qeybta ugu wanaagsan ee ku saabsan habkan waa in inta movie waxaa hoorto on TV aad multitask karaa aad kaniini oo sii wadaan ka shaqeynta haddii jeer ma aha gebi ahaanba bilaash ah. Kids Your sii wadi kartaa daawashada filim iyo naftooda madadaalinta halka aad ka dhamaysid aad shaqada ku raco. Waa in la sheegay in filimada kiro ah muujiyaan marka dhibaato lagu go'an ilaa TV a.
Fiilooyinka adabtarada AV
Waxaad ka iibsan kartaa cable adabtarada ah oo ay ku biiraan iyaga si ay TV ku aadan heli tayada sawirka cajiib ah. Fiilooyinka Kuwaas waxaa inta badan ay bixiyeen laftiisa Apple laakiin lagama yaabo inaad u rabto in aad in loogu fiilooyinka qaali ah oo iyaga ka baxsan oo ay degaanka ee suuqa. Tani waxa kale oo idinka badbaadin doonaa, haba yaratee quruxsan markii la tixgelinayo kharashka guud ee daawashada filimaanta on TV a.
1. Watch Lugood filimada on TV by in DVD ah gubanaya
Free Haa Easy. Ma u baahan tahay si loo soo dajiyo barnaamij
2. Watch Lugood filimada on TV via computer
Qiimaha fiilooyinka HDMI $ 50-60 Haa Way adag tahay. Ma u baahan tahay noocyo ka mid ah cable iyo aqoonta
3. Watch Lugood filimada on TV Apple
TV Apple $ 250 Haa Way adag tahay. Ma u baahan tahay in subscribe
4. Watch Video ka Your iPad on your TV
Qiimaha Airplay, Qiimaha fiilooyinka ka Apple ama haddii kale Haa Easy. Horudhac ah iyagoo wax soo saarka Apple
Sidee si ay u gudbiyaan Lugood Books Audio in Android Devices
Sidee ayaan si fudud oo toos ah ku dari kartaa metadata in Lugood
> Resource > Lugood > Lugood Movies ah TV Marathon